Xaflad lagu soo dhaweynayey R/wasaarihii hore Farmaajo Kampala ka dhacdey (Sawiro) – SBC
Xaflad lagu soo dhaweynayey R/wasaarihii hore Farmaajo Kampala ka dhacdey (Sawiro)
Posted by editor on Julaay 12, 2011 Comments
Xaflad lagu soo dhaweeynayey R/wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta ka dhacday xarunta Jaalidda Soomaalida waddanka Uganda gaar ahaan xaafada Soomaalida ay u badan tahay ee Kisenyi.
Xafladda ayaa waxaa ka soo qeyb galay boqolaal Soomaali ah oo u badnaa madaxda Jaaliyadda, Odayaal, aqoonyahanno, dhalinyaro Haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ku dhaqan Magaalada Kampala,waxaana halkaasi ay ku muujiyeen shucuurtooda ku aaddan waxqabadkii iyo hormarkii ay ku talaabsatay xukuumaddii hore ee uu hurmoodka ka ahaa Maxamed Cabullaahi Maxamed (Farmajo) iyo dadaalka ay soo bandhigtay xilligii ay jirtay.
Guud ahaan Jaalidda Soomaalida ee dalka Uganda ayaa waxaa ay wateen boorar ay ku xardhanaayeen Calanka Soomaaliya Sawirka Ra’isul wasaare Farmajo iyo halkudhigyo ka turjumaya shucuurtooda iyo taageerada ay u muujinayaan xukuumada KMG Soomaaliya.
Dadkii ka hadlay munaabasadda lagu soo dhaweeynayey Mudane Farmaajo waxaa ka mid ah C/kariim Cukaash, Xuseen Garweyne, Jaamac Seed, Xaaji Xasan Bayaxaaw, DR. Shire Cabdi iyo dad kale oo faro badan kuwaasoo halkaan magacyadooda lagu soo koobin karin iyagoo dhammaantood halkaas ka sheegay in xukuumaddii hore ee Farmaajo wax weyn ka qabatay dalka Soomaaliya gaaran caasimadda Muqdisho, kuna tilaabsatay muddadii ay jirtay guulo la taaban karo, waxayna ku tilmaameen inuu Farmaajo yahay nin waddani ah, una qalmo madaxweyne Soomaaliyeed, loona bahan yahay in madaxda Soomaaliya ay ku daydaan, xukunkana isku dhejin.
Sidoo kale waxaa ka hadaly R/wasaarihii hore Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa ka hadlay munaasabadda ay Jaaliyadda Uganda ku soo dhaweeynayeen, waxa uun asheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida Soomaalinimada leh oo ay u soo dhaweeyneen, islamarkaana ay ku mahadsan yihiin midnimada ay sameeyeen, loogana baahan yahay inay qabyaaladda la dagaalamaan si loo soo celiyo sharaftii iyo Qaranimadii uu lahaa dalka Soomaaliya, loogan baxo abaaraha iyo colaadaha daashayday waddkanka Soomaaliya.
“Waa inaan gacmaha isqabsanaa oo aan midoownaa, qabyaaladda aasnaa, taasina waxaa lagu gaari karaa midnimo guud, dalka waxa uu leeyahay cadaw fara badan marka waxaa waajib nagu ah ni guud ahaan midnimada baadi goobnaa, una kornaa geed dheer iyo geed gaaban sidii waddabka Soomaliya ugu soo dabaali lahayn amni iyo nimaad dowli ah si aan ula jaan qaadno caalamka.”
Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) waxa kalo o intaas uu ku daray inuuan ahayn ahmiyaddisa koobaad inuu madaxweyne noqdo, balse ay tahay ujeeddadiisa koobaad sidii loo mideyn lahaa ummadda Soomaaliyeed oo ay daashadeen dhibaatooyin sida qabyaaladda, dagaalada iyo abaaraha tan iyo markii ay burburtay xukuumaddi dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991-kii.
R/wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Maxamed (Farmaajo) waxa kaloo amaan ballaran u soo jeediyey dowladda Uganda sida wacan oo ay u soo dhaweysay Soomaalida iyo taageerada ay la garb taagtan tahay DFGKM Soomaalia sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd gebi ahaan waddanka Soomaaliya.
Dadweynaha ka soo qeyb galay munaasabadd ayaa waxay qaadayeen heeso wadaniyeed iyo nabad jeceyl,waxaana halkaasi tixo gabay ah oo dadkii ka soo qeyb galay iyo marti sharaftii qiiro waddaniyadeed galiyay ka jeediyay Abwaan khaliif weyne,waxayna dadweynihii munaasabadda joogay si qiiro leh u taageerayeen Mudane Farmaajo, waxayn kula dardaarmeen inuu khalkiisa ka sii wado dadaalkiisa waddaniyadeed.
Sida la wada ogyahay xukuumaddi Farmaajo waxay ahayd xukuumad tayo leh oo abid soo martay gayiga Soomaaliyeed. mudadii lixdabilood oo ay jirtay waxay ku tilaabsatay hormar la taaban karo islamar ahaataana waxay la dagaalantay musuqmaasuqii la dagay dhammaan xukuumadihii ka horeeyey xukuumaddii Farmaajo.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Uganda ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin dad had jeer jecel in maruun Soomaaliya cagaheeda isku taagto.
W/D Axmed-Saadaq Yuusuf
SBC Kampala Uganda